Madaxweynaha Puntland oo safarkiisii labaad ee dalka dibadiisa ah ku aaday Shiinaha - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo safarkiisii labaad ee dalka dibadiisa ah ku aaday Shiinaha
Madaxweyne Deni oo gacan haatinaya kahor inta uusan u safrin Shiinaha. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Axad ah u safray dalka Shiinaha.
Kahor inta uusan tagin Deni ayaa warbaahinta u sheegay ujeeada safarkiisa dhiinaha, waxaana uu yiri: “Waxaan maanta safar shaqo ugu ambabaxay dalka China aniga iyo wefti Wasiiro ka kooban oo ila-socda, safarkaasi waa safar ka kooban sidii wax wadaqabsi noo dhexmari lahaa gobol kamid ah gobolada China ee dhinacyada horumarinta ganacsiga iyo kala faa’iidaysiga khibradaha ee dhismayaasha wershadaha iyo xoojinta xidhiidhka ganacsi ee naga dhexeeya.”
“Waxaan rajaynaynaa mudadaas aan joogno in aan aragtiyo fiican kala soo noqon doono, iyagana aan u sharixi doono fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Puntland ay leedahay, waxaan aad ugu faraxsanahay in dalalka ka qayb-qaata koboceena dhaqaale in ay yimaadaan dalkeena, iyagoo u soo maraaya sharciga iyo nidaamka dowliga ah.” Ayuu ku sii daray.
Madaxweynaha ayaa sheegay in maalgashadayaasha Shiinaha ay ugu yeeri doonaan shirka maalgashiga Puntland oo xagaaga ka dhici doona Garoowe.
“Waxaanu sidoo kale jecelnahay in aan ugu yeedhno iyaga iyo wadamadii hore aan u tagnayba shirka maalgashiga ee Puntland ka dhicidoona oo aan rabno khayraadka dihin ee dalkani leeyahay in ay maalgashtaan, sida kalluumaysiga, macdanta, beeyada iyo waxyaabaha la xiriira wax soo-saarkeena.”
Waa safarkii labaad oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu ugu ambabaxo dibada tan iyo markii la doortay bishii Janaayo 2019.
Islamabad-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Pakistan Mamnuun Xuseen ayaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiyi doona dalkaas Khadiija Maxamed al-Makhsuumi. Qaabiilaada safiirada cusub ee Soomaaliya ayaa si heer sare ah loo maamuusay, [...]
Hal qof oo ku dhintay diyaarad yar oo ku burburtay dhulka Rift Valley ee dalka Kenya
Nairobi-(Puntland Mirror) Sarkaal booliis oo Kenyaati ah ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad ay ku burburtay meel u dhow garoon diyaaradeed kuyaala Rift Valley. Taliyaha [...]
Nairobi-(Puntland Mirror) Huteel kuyaala caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa weerar lagu qaaday galabta oo Talaado ah. Ugu yaraan labo qarax iyo rasaas ayaa laga maqlay xarun kutaala degmada Westland ee magaalada Nairobi, halkaas oo [...]